Wholesale plywood yekugadzira mutsara Mugadziri uye Mutengesi | Kusanganisa
Saizi yakaenzana ndeye 1220mmx1440mm, uye iwo akajairika makobvu ari 3mm, 5mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm etc. Huni huru inoshandiswa plywood yakafanana nepoplar, beech, pine, birch, meranti, eucalyptus, okoume zvichingodaro.
Multilayer plywood ndeye-nhatu-yakaturikidzana kana yakawanda-yakaturikidzana jira rakagadzirwa nehuni veneer uye ndokunamirwa neanamatira. Iyo inowanzo shandisa isinganzwisisike nhamba yezvikamu zvevhenekeri uye inoita iyo fiber madhiri eiri padyo veneers kutaridzika kune mumwe nemumwe. Iyo michina inoshandiswa mukugadzira maitiro inosanganisira:
Ukanyatsotarisisa peeling mutsetse, ukanyatsotarisisa Dryer, guruu chisanganiso, guruu spreader, paving muchina, chando wokudhinda, inopisa wokudhinda, kumucheto kugera akaona uye sanding machine.Our kambani ane makore akawanda ruzivo R & D uye kugadzirwa, kupa vatengi pamwe chete-chemabhazi mhinduro, uye mushure mekuguma kwekumisikidza kupa vatengi kugadzirwa kwehunyanzvi hutungamiriri. Sevhisi yedu haizomira kudzamara vatengi vawana zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogutsikana.
Iyo plywood inogadzira tekinoroji ichadzidziswa kumutengi mushure mevatengi vatenge mutsetse wekugadzira, uye isu tichava nebasa rekuyedza kumhanya kwemuchina mutsetse kudzamara vatengi vawana zvigadzirwa zvakatariswa zvemhando yepamusoro.
1.Tine nyanzvi dzekutengesa uye nyanzvi uye mapoka ebasa. Isu tinopa imwe -mira mhinduro uye yehunyanzvi yekuisirwa uye kutumira.
2.Kushandiswa kwehungwaru senge PLC auto control system uye isina kumisikidzwa yekumhanyisa system inovandudza mashandiro ekushanda uye chengetedza basa uye mutengo wekugadzira.
3.Nokia mota dzinoshandiswa mumutsetse wekugadzira kuve nechokwadi kuti michina iri kushanda zvakanyanya.
4.Yakakwira simba simbi mahwendefa anoshandiswa mune ino mutsetse ndeye otomatiki akachekwa uye akasungwa, kuitira kuti inoenderana michina inomhanya yakatsiga, yakanyatsoita.
Pashure: danda debarker
Zvadaro: makorari sanding muchina